Booliska Soomaaliya ma sugi karaan amniga magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka soo socda? – Bandhiga
Booliska Soomaaliya oo ma sugi karaan amniga magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka soo socda?
Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa lagu wadaa inay qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya ka bilaabaan kormeer la xiriira dhanka Amniga.
Wafdigaan oo safarkooda ugu horeeya ku tagaya Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmudug ayaa waxaay kormeer ku tegi doonaan Xarumaha loogu talo galay inay ka dhacaan doorashada Xildhibaannada labada Aqal, iyagoo qiimeyn ku sameyn doona sida loogu diyaar garoobay & howlaha Amniga ee ka socda Magaalooyinka ay doorashooyinka ka dhacayaan.
Wafdiga Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa waxaay kulan la qaadan doonaan Mas’uuliyiinta Maamulka Galmudug, iyagoo kala hadli doona sidii loo dardar gelin lahaa sugida Amniga inta ay socdaan howlaha doorashooyinka.
Sidoo kale wafdiga ayaa waxaay tegi doonaan degaano kale oo ka tirsan Maamul goboleedyada si ay qiimeyn ugu sameeyaan diyaar garoowga dhinaca Amniga ee doorashooyinka soo socda.
Kal hore Madaxa Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira, ayaa ballanqaaday taageerada howlgalka si loo hubiyo in doorashooyinka Baarlamanka iyo Madaxweynaha Soomaaliya ee 2020/2021 ay noqdaan kuwo ammaan ah oo guuleysta.
Isagoo ka hadlayey kulan khadka tooska ah khamiistii ay la yeesheen mas’uuliyiinta ajandaha guud ee bulshada Soomaaliyeed (SPA), cilmi baaris iyo urur dowladeed oo aan dowli ahayn oo fadhigiisu yahay Muqdisho, Danjire Madeira wuxuu sheegay in AMISOM ay tababar siisay ciidamada Amniga Soomaaliya oo ku saabsan maaraynta khataraha amniga doorashooyinka ayna diyaar u yihiin inay taageeraan. habka doorashada.
Iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyaddeenna, waxaan ka heli doonnaa cutubyo Booliis ah oo AMISOM laga sameeyay dhammaan goobaha ay ka taliyaan ciidamadeennu. Waxaan taageeri doonnaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Darwiish iyo hey’adaha kale ee amniga, ”ayuu yiri.
Hadda Soomaaliya waxa ay wajaheysaa doorashooyin loo madalsan yahay in ay dhacaan dabayaaqadda sanadka iyo horaanta sanadka cusub, balse ilaa iyo hadda ma cadda dusha u ridan doonto amnigga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan.